प्रिमियर इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन रु. ५९ करोड, नाफा ५२%ले बढ्यो, ईपीएस रु. ३५.९४ Bizshala -
प्रिमियर इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन रु. ५९ करोड, नाफा ५२%ले बढ्यो, ईपीएस रु. ३५.९४
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५९ करोड रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ।
आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ११.४१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ५२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा यो कम्पनीले लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट हुने आय ४२.७३ प्रतिशतले बढाएर ९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
यो अवधिमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी २६.०७ प्रतिशतले घटेर २७ करोड ८ रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म यस्तो भुक्तानी ३६ करोड ६४ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन खर्च ४.७२ प्रतिशत बढेर १५ करोड ८० लाख रुपैयाँमा सीमित बनेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन खर्च १५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीले बीमा कोषको आकार बढाएर ८१ करोड ५ लाख रुपैयाँको उचाइमा पुर्याएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो कोषको ५९ करोड ७ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।
अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्म २६ करोड ७ लाख रुपैयाँको जगेडा तथा कोषको आकार बढेर ३३ करोड ३९ लाख रुपैयाँको उचाइमा पुगेको छ। त्यस्तै महाविपत्ति जगेडाको आकार ५ करोड ४९ लाख रुपैयाँबाट घटेर ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा सीमित बनेको छ।
तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको नाफा ५२.०७ प्रतिशतले बढेर २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको नाफा १९ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जारी बीमालेखको संख्या १ लाख २३ हजार ५९९ पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा यो संख्या १ लाख ९ हजार ७०९ रहेको थियो।
चुक्तापुँजी १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको वार्षिकीकृत प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ३५.९४ रुपैयाँ रहेको छ। पीई रेसियो ३५.८१ गुणा रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २१०.२२ रुपैयाँ रहेको छ।
premier insurance company nepal ltd Q3 2077/78
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन ३७.५%ले बढ्यो, नाफा
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक...
सगरमाथा इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन रु. ९५.२९ करोड, नाफामा
काठमाण्डौ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक...
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा चमत्कारिक बचत सिरिजअन्तर्गत उपलब्ध
काठमाण्डौ। एनआईसी एशिया बैंकले बचतसँगै बीमा सुविधाले भरिपूर्ण...
२१ औँ वर्षमा नेपाल लाइफ : महामारीबीच पनि सरल रुपमा सेवा प्रवाह
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आफ्नो...
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज
काठमाण्डौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २६ औँ...
हिमालयन जरनल इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा,
काठमाण्डौ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २७ औँ...
सानिमा जरनल इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन रु. १३.८४ करोड, नाफा
काठमाण्डौ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको...
बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख जारी र नवीकरण अनलाइनबाट गर्नुपर्ने,
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनहरुले...